Iji igwefoto a na - eyi n’ahụ arụ ọrụ - Ngwọta OMG
Iji kamera aru nke ndi ulo oru dika ahia, ahia, ahia, mkpuchi, ugbo, owuwu ihe, imeputa ihe, ugboala, ikwuputa okwu, eletriki, ikuku, oru ocha na ulo ndi ozo bu nke a choro. Industlọ ọrụ ndị a ebidola inye ndị ọrụ nchekwa nchekwa igwefoto ahụ ha na-eme iji wee chekwaa azụmahịa ha na mmekpa ahụ na mwakpo ọhaneze.
Mmụta banyere iji igwefoto ndị mmadụ na-eyi na-egosi na enwere nnukwu ọdịiche na mgbe na n'ihu ọnụ ọgụgụ mmetọ, ime ihe ike, na iyi egwu dị na ụlọ ọrụ ndị a kpọtụrụ aha. Ọtụtụ ndị isi tụrụ aro igwefoto ahụ na-eyi dị ka ngwaọrụ na-ewuli elu nke edozila ọtụtụ n'ime nsogbu ha. N'ebe a, anyị na-atụle ojiji nke igwe eji arụ ọrụ na-eyi nke ndị ọrụ na usoro ndị a:
Lezụ ahịa na azụmaahịa:
Nrụpụta nke igwe eji arụ ọrụ dịka teknụzụ iji mmanye iwu dịkwa mkpa maka ndị ahịa na ndị na-echekwa ụlọ ahịa. Stolọ ahịa dị ka Wal-Mart's UK bidoro ịkwado ndị nche nchekwa na igwefoto ndị na-ahụ maka ngwa ọgụ na mbo iji chebe azụmahịa ha na mmekpa ahụ na mwakpo sitere na ọha.
Odeakwụkwọ ukwu nke Union of shop, Distributive and Allied Workers in Manchester, Paddy Lillis kwuru na obi abụọ adịghị ya, igwefoto ndị ahụ na-eyi nwere oke iwe ma na-akwado nkwado nke usoro ndị dị otú ahụ na-elekwasị anya belata egwu, ime ihe ike, na mmegbu na ọrụ.
USDAW kwuru na nyocha nke ndị otu ụlọ ahịa na-egosi mmụba 25% na ime ihe ike karịa ọgụ 230 wakporo ndị na-ere ahịa United Kingdom.
Otu onye na-ere igwefoto na-achọpụta obere ọdịiche dị na iji igwefoto ahụ yana mmanye iwu yana nchekwa nchekwa. Ebumnuche ebumnuche nke igwefoto eyi ahụ bụ iji belata ime ihe ike megide onye na - ejide igwefoto, nye ihe akaebe nke mmekọrịta iji kwenye ma ọ bụ megide ebubo ọ bụla ma nye echiche eleghị anya ọhụụ.
Igwefoto ahụ yi ya n'ahụ bụ otu nzọ ụkwụ n'ihu igwefoto CCTV n'ihi na nke ikpeazụ enweghị ụda. Igwefoto ahụ na-eyi n'ahụ na-enye nkwado ọzọ na ike ịnakọta ike n'ihi na ha na-ejide ọdịyo na vidiyo.
Ojiji eji ese foto ndi ahu di iche-iche tinyere ahia, ulo ogwu, egwuregwu, na ebe egwuru-egwu abughi otutu ihe eji akwado ya. Gụọ Hayes, onye nyocha sayensị na Mahadum Florida na-ekwu na ọ maara ụlọ ahịa dị na United States America na-eji igwefoto eyi na-eyi mana ọ jụrụ ịkọwa aha ụlọ ọrụ ndị ahụ.
Ndị otu Hayes na ha na-azụ ahịa na-azụ ahịa maka ịzụlite nnwale ebe ndị ọrụ ebe na-adọba ụgbọala dịka ndị nchekwa na ndị na-anakọta ụgbọ nwere igwefoto nwere ahụ ha na-ahọrọ n'ụlọ ahịa. A ga-enyocha ha gbasara ndị mmekọ na-enweghị igwefoto dịka ọnụ ọgụgụ ụlọ ahịa ndị nwere ọnọdụ dị iche iche na ọnọdụ ndị ahịa, na-atule atụmatụ dịka ọmụmaatụ mgbe a na-arịọ ndị ọrụ maka enyemaka ma ọ bụ ozi, ọnụ ọgụgụ mkpesa na ọnọdụ nke esemokwu. Hayes kwuru na nnwale ahụ kwesịrị ịdị na-esote ọnwa atọ na ọnwa isii.
Na nchikota, iji ihe ndi eji eme onyunyo emeela ihe nyere aka n’ibelata ime ihe ike n’ime afo ole na ole gara aga. Ndị na-adọba ụgbọala nke ndị ọrụ na Scotland na-eyi igwefoto ndị nwere isi. Na njedebe nke nyocha ahụ, e gosipụtara na ndị ọrụ igwefoto ahụ nwere ihe eji arụ ọrụ gosipụtara mmerụ ahụ dị njọ site na ọha na eze. N'otu aka ahụ, na City Center Management na Belfast, Northern Ireland, e mere nnwale ọzọ na mpaghara mkpọchi azụ ma na-esite na 43% belata na izu ahịa. Nsonaazụ ndị a na-egosi na igwefoto ndị merela ahụ na-eweta mgbanwe dị ukwuu na mbelata ime ihe ike.
Nrụpụta nke igwe eji arụ ọrụ dịka teknụzụ onyunyo dịkwa mkpa maka ụdị ọrụ ugbo na ndị na-echekwa ọrụ ubi iji chọpụta ohi na ndị na-emebi iwu. Mkpụrụ osisi ahụ na-eyi ndị ohi egwu mgbe ọ bụla ịchọ izu ohi. Oriakụ Patricia Corcoran bụ onye nwe ahịhịa mkpụrụ osisi strawberry na California. O nyere ndi nche ya nche igwe eji eyi ahu maka na o na echegbu onwe ya banyere ohi. Ọ bụghị naanị kamera ahụ yire ndị ahụ metụtara ndị ohi kama ha na-enyochakwa ohi site na mkpụrụ osisi ya.
Ọ bakwara uru ilebara ndị ọrụ ugbo anya n'ihi na igwefoto CCTV enweghị ike idekọ ọnụnụ ebe igwefoto ahụ nwere eyi nwere ike ijide ma ọdịyo na vidiyo. Enwere ike na ndi oru ugbo nwere ike itinye aka na ohi na nduhie ndi ozo. Ọ bụrụ na onye njehie nwara ịbanye n'ubi mkpụrụ osisi ma ọ bụ ịkọ ugbo ma nwaa izu ohi ma ọ bụ merụọ ya ahụ, ihe osise igwefoto ahụ nwere eyi nwere ike ịchọpụta onye ahụ mebiri emebi.
Nchoputa a dabere n’echiche ndi oru ugbo na ndi oru ugbo na egosiputa na iji igwefoto ndi ahu n’eme ka aru ghara idi onodu ugbo ihe banyere ugbo.
Oriakụ Patricia Corcoran nwere mmasị na arụmọrụ nke igwefoto ndị na-eme ahụ na-enye nsonaazụ ya dị mma n'ihi na ọ na-echegbu onwe ya nke ọma n'ihi nsogbu ndị ohi na ubi ya. Ọ dụrụ ndị ọrụ ugbo ndị ọzọ ọdụ ka ha jiri igwefoto nwere ahụ ha maka ilegide anya na ọrụ ndị ọrụ ugbo na ịlele ohi.
Ngwuputa ahihia di egwu nke ukwuu, umuaka anabatakwa otutu nsogbu n’oge oru ha ma oge ufodu ndu ha n’enwe nsogbu. N'otu aka ahụ, ụlọ ọrụ ndị na-egwupụta akụ na-eche oke ihe egwu egwu nke ịdabere na onyunyo vidiyo nwere ike belata. Ojiji eji ese foto eji eme ahu na-ebelata oke nsogbu ndi a na - egwuputa ihe.
Nche igwefoto Ngwuputa onyinye na uzo ndi a:
* Na-eme ka ndị ọrụ na-agbaso usoro nchekwa nchekwa
* Na-ezere ohi na mbibi
* Monitors na-ejizi ihe mkpofu
* Na-egbochi ndị na-emebi iwu na ndị n’enweghị ikike ị nweta ohere
* Kwe ka ikiri mkpanaka maka saịtị na-ele anya
* Na-ejide mmebi nke iwu nchekwa na nchekwa
* Na-enye nkọwa doro anya nke ebe a na-egwupụta ihe
* Nyochaa ihe kpatara ihe mberede egwupụta
Anyị niile nụrụ ma kwenye n'ezie na nchekwa dị oke mkpa. Na ngalaba uloru nchekwa ihe nke mmadu di nkpa. Nyochaa nchekwa na Industrylọ Ọrụ Ewuwu na-ewekarị oge ma dabere nke ukwuu na ịnweta ezigbo data sitere n'aka ndị ọrụ ma ọ bụ na-agba akaebe maka ihe ndị na-eme na saịtị ahụ. Otu n'ime ndị enyi anyị gwara m na ụlọ ọrụ ya mere nnwale nke Jiri Ahụike Cameras maka owuwu. Ọ bụ obere ndị ọrụ sitere na 5 ruo mmadụ 10. Ebumnuche nke nnwale a bụ inweta eziokwu na ọnụ ọgụgụ banyere ihe dị iche iche mere na Industrylọ Ọrụ Ewu Ewu. Companylọ ọrụ ahụ ga-enwe akaebe nke ndị ọrụ na ihe ọdịyo / vidiyo gbasara ihe mere n'oge ọrụ niile nke iwu ụlọ.
Companieslọ ọrụ ndị na-ewu ihe owuwu anaghị ahazi ụdị ihe ahụ. Nnwale ahụ a kpọtụrụ aha na-amịpụta mkpụrụ dị ukwuu iji nweta ahụmịhe ma meekwu nchekwa. Nke a mepee Pandora's Box nke ajụjụ na weebụsaịtị webụsaịtị na-achịkwa foto na vidiyo nke ndị ọrụ yana nwekwara ihe metụtara ikike ndị ọrụ kwesịrị ịlele. Nchọpụta a maka ndị ọrụ 5 ruo 10 na ụlọ ọrụ na-ewu ụlọ na-egosi na iji igwefoto ejiri rụọ ọrụ bara ezigbo uru maka ụlọ ọrụ nke iwu. Site n'iji BWCs, anyị nwere ike ịchọpụta ọgba aghara ndị na-etinye nchekwa nke ndị ọrụ na-ewu ihe egwu.
Igwefoto ahụ na-eyi n’ahụ nwere ọrụ dị mkpa iji nyochaa osisi ị na-emepụta. Inwe ike ịchekwa ụlọ ebe a na-ere ihe ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-emepụta ihe na-aga ogologo oge mgbe nchekwa bụ nchegbu. Mgbe ị na-elele osisi na-emepụta gị, ọ nwere ike ịbawanye arụmọrụ ya n'ihi na ọ na-adịgide n'okpuru nyocha gị oge niile. Ving nye gi ndi n’enweputa ahihia nwere ike ikwusi ohi na mpu ndi ozo. Can nwere ike lelee mmebi na ọghọm ndị ọzọ site na igwefoto onyonyo ruru. Ọ bụrụ na mmadụ mara na ọ na-echekwa igwefoto, ọ na-ezere ime mpụ. Ọzọkwa, ya na igwefoto nkọwa dị elu, ọ bụrụgodi na mmadụ nwara ime mpụ n'ime ụlọ ọrụ ahụ, ọ nwere ike weghara ọrụ ya niile. Site na mkpuchi 24 / 7, ị ga-ama ihe niile na-eme n'ụlọ ọrụ gị, gụnyere ọtụtụ ebe n'oge ọ bụla.
Site na nchedo gburugburu elekere, ị nwere ike ịchọpụta ma ihe ndị metụtara ọrụ bụ n'ihi nleghara anya nke onye ọrụ, ịgaghị ịgbaso ụkpụrụ, akụrụngwa na-adịghị mma, na ndị ọzọ. Ọbụlagodi na onye ọ bụla nọ na ụlọ ọrụ gị na-akpachapụ anya nke 100% nke oge ahụ, ihe ọghọm ka nwere ike ime, na ịnwe igwefoto nchekwa na olu olu onye ọrụ gị agaghị ewetara gị udo nke obi kamakwa belata ego mkpuchi.
Mgbe ndị ọrụ na ndị ọrụ nchekwa n'ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke ụlọ ọrụ ahụ na-enyocha igwefoto ahụ na-eyi ahụ, ha ga-anwa rụọ ọrụ nke ọma. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike imeziwanye arụmọrụ na arụmọrụ nke ụlọ ọrụ na-emepụta ihe.
Collin Green, Onye njikwa nchekwa maka Ragbọ Mmiri Ndịda, United Kingdom matara mkpa ọ dị inwe ngwá ọrụ nke ga-arụ ọrụ dị ka ihe na-egbochi ya na ọ dị mkpa ịnakọta ihe akaebe mgbe a na-atụgharị. Maka ebumnuche a, ọ mere nchọpụta wee hụ usoro mgbasa ozi nwere ọrụ anyị na-achọ. Ọ hụrụ igwefoto ndị yi ya n'ahụ bara ezigbo uru maka ngalaba ya. Ọ kpọrọ ya bara uru nke ukwuu ileba anya n'ihe omume na ngalaba ha. Mgbe Maazi Colin Green weghaara ọrụ nke onye isi nchekwa nchekwa nke South Railway, United Kingdom jisiri otu ndị ọrụ Rail Neighborhood ọrụ na-arụ ọrụ na ụgbọ oloko na ọdụ ndịda nke South England. Maazị Colin na-eleba anya na ike nke ịzụta igwefoto ndị ọzọ Gosipụta Ahụ n'ọdịnihu iji mee ka ngwaọrụ ndị ahụ bụrụ nchegbu onwe ya.
Ntinye ego dị mkpa site na ụzọ ụgbọ oloko maka igwefoto na mbu. Ha bidoro iji igwefoto dị na Railway.
Ọdịiche dị a camerasaa ka igwefoto eyi?
Ngosipụta ejirila igwefoto dị elu. Ndị ọrụ nchekwa nchekwa South Railway yiri jaket yiri uwe ojii. Mgbe ụfọdụ, ha nwere ike bụrụ ihe ịma aka mgbe ha na ndị na-eme ihe ike na-alụ ọgụ ma ọ bụ mmanya na-egbu. Ha achọpụtala ihe dị iche na akparamagwa ndị mmadụ n'ihi na mgbe ọha mmadụ chere na igwefoto dị na-aga, ha na-ezere iduhie. Oge izizi ha jiri eserese dị ka ihe akaebe mgbe ha gosipụtara onye na-emetụ vidiyo vidiyo, na-arịọ arịrịọ ikpe, natara ọkwa ntaramahụhụ.
In oge ugbu a nke teknụzụ dijitalụ, òtù nkwukọrịta, dị ka AT&T, T-Mobile, Verizon Communications, Charter Communications, wdg. na United States nke America chọrọ nyocha igwefoto iji bulie arụmọrụ ha. Agbanyeghị igwefoto CCTV dị mkpa mana ọ nwere ike ijide ọdịyo ma nyekwa nlele vidiyo naanị ebe igwe eji arụ ọrụ nwere ọnọdụ ha n'echiche nchebe. Ha na-enye usoro onyunyo onyunyo kachasị elu na ndekọ na ọdịyo na vidiyo. Idebe eziokwu ndị a na ụlọ ọrụ ndị na-ele anya dị ka Charter Communication, AT & T, Verizon Communications, wdg. Na-achọ ịkwalite ikike nchebe nke azụmahịa ha site n'inye ndị ọrụ nchebe ha kamera.
Mobilink bụ ụlọ ọrụ nkwukọrịta ama ama na Pakistan. Ihe mere apụnara mmadụ ihe mere na inlọ Ahịa Fisalabad. Otu mmadụ zuru ohi mana ndị ọrụ nchekwa enweghị ike ịnye ihe akaebe n’ihi na ha enweghị igwefoto eyi. Ihe omuma a gosiputara uzo igwefoto ndi nwere aru di nkpa maka ulo oru nkwukọrịta.
electric nrụnye dị oke egwu n'ihi na ọbụlagodi ntakịrị akpachapụghị anya nwere ike ịme ndụ mmadụ. Nrụpụta nke igwe eji arụ ọrụ dịka teknụzụ onyunyo dịkwa mkpa maka ngalaba eletriki.
Abamuru nke iji kamera ndị eyi na-eyi n ’ụlọ ọrụ Electric:
Machibido ndị ọrụ irube isi n'iwu nchekwa n'oge oge ha na-arụ ọrụ n'ihi na ọbụlagodi ndị na-ahụ maka ọrụ na-akpachapụ anya merụọ ha ahụ. Iji lelee ihe merenụ, ọ dị mkpa ịhapụ iwu na usoro nchekwa niile.
Mee ka ndị na - enye iwu na ndị na - enyeghị ikike nọ ọrụ ikike nke ụlọ ọrụ eletrik ọ bụghị naanị na - enyocha mmerụ ahụ ma chebe ha pụọ ​​na nrụnye eletrik dị ize ndụ.
Nyochaa ndị ọrụ ma ha na-agbaso iwu nke ụlọ ọrụ ahụ ma ọ bụ na ha anaghị agbaso
Leruo anya na-eji ihe mkpofu eme ihe
Zere izu ohi na mkpọmkpọ ebe
Leruo anya ufu
Kwee ka ịlele mkpanaka maka ịpụpụ saịtị
Nyochaa ihe kpatara ihe ọghọm na ọghọm ndị ọzọ
ọtụtụ teknụzụ ndị na-ewu ewu na-anya ụgbọ ala na mmanụ mmanụ. Exxon Mobil onye isi ụlọ ọrụ mmanụ na gas na United States nke America enyela igwefoto ahụ maka ndị ọrụ nchekwa ya na ndị ọrụ ya. Ebumnuche a na-eche nche igwefoto bụ iji nwekwuo arụmọrụ nchekwa, na-eche nche na ndị ọrụ ugbo. Site n'iji igwefoto eyi uwe site na nchekwa na ndị ọrụ ubi ụlọ ọrụ ahụ chọrọ ịgbaso ebumnuche:
Na-ekwe nkwa iwu nchekwa
S na-egbochi ndị iwu na ndị ikike gị ka ha ghara ịbanye na mpaghara mmanụ mmanụ
Na-enyocha ndị ọrụ 'ma ha na-agbaso iwu ụlọ ọrụ ma ọ bụ na ha anaghị erubere ya
Na-eme ka a mata ebe a na-emepụta gas
Na-ahụ maka iji ihe mkpofu eme ihe
Na-ezere izu ohi na mkpọmkpọ ebe
Na-elegide anya n'ihe na-emebi emebi
Enye ohere iji nlele mee ihe maka ịpụga na saịtị
By na-eji kamera na-ahụ maka ọrụ ịdị ọcha, enwere ike inyocha ọnọdụ nke ime ụlọ ịsa ahụ ọcha na ebe a na-arụ ọrụ ebe a na-enyocha onyonyo na oge. Ga-achọpụta nsogbu dị iche iche na ụdị ha.
Iji maa atụ, CASA Sanitary Wares Factory, Canada nyere ndị ọrụ nka ya na ndị ọrụ ndị ọzọ kamera eyi. Ha ritere uru nke igwefoto ahụ yi n’ọrụ ndị a:
Site n'iji nyocha BWC n'oge a na-enyocha ya, ha kwesịrị ịnakọta data dị elu nke enwere ike ibute ma nyekwa mmechi nke ebe ezubere iche. Mgbe nyocha ahụ gasịrị, ha ga-enye akụkọ ederede na vidiyo dị elu. Na njedebe nke ụbọchị, ha wetara data bara uru nke agaghị ekwe omume na-enweghị eji teknụzụ ọgbara ọhụrụ ahụ.
N'otu aka ahụ, iji kamera na-eyi ihe mebiri emebi nyocha akụkụ ahụ. Maka usoro ọwa mmiri na-ejikọta ụlọ na azụmaahịa na sistemụ nsị Central. Nyocha ndị a nyere usoro bara uru iji lelee ihe mgbochi, mkpọchi ma ọ bụ mmebi. Site na ihe osise igwe onyonyo eyi, ha wepụtara akụkọ dị mma banyere mgbochi, mkpọchi obe na mmebi.
Maintenancerụzi manhole kwesịrị ekwesị dị mkpa maka arụmọrụ sistemụ nrụọrụ. Companylọ ọrụ ahụ enyochaala ma nyochaa ọtụtụ akụrụngwa ndị a gụnyere gụnyere manholes wdg. Ha nyere ihe ngosi vidiyo na nyocha ha site n'enyemaka nke igwefoto ahụ mere.
N'ihi ya, ọrụ ọrụ ịdị ọcha amalitela ịdabere na kamera ndị na-eme ka ahụ ha ka ọ dịkwuo arụmọrụ.
Financial A na-ahụta ụlọ ọrụ dịka ụlọ akụ dịka ụlọ ọrụ kacha echebe ụwa. Anyị na-enyefe ego, ọla na akwụkwọ dị mkpa iji nyefee ha. Ya mere, usoro nlere onyonyo kachasị elu dị mkpa maka ụlọ ọrụ ego ndị a. Site na ihe ọhụụ na teknụzụ dijitalụ na nlele IP, ọtụtụ ụlọ akụ na-achọ ịkwalite arụmọrụ nke usoro nchekwa ha site na itinye ego na teknụzụ ọhụrụ a.
Uru nke eserese ahụ eyi na Banks na ụlọ ọrụ ego ndị ọzọ:
Anoghi oru na anoghi n'ulo oba ndi mmadu na acho izo ugwo. Mbido igwefoto a na-etinye igwefoto kwesịrị ekwesị nwere ike inyere aka gbochie ohi.
N'ihe banyere ohi na ohi zoro ezo nwere ike iji igwe iji mata ndị a na-enyo enyo.
Igwefoto ndị mebiri emebi na sistemụ igwefoto CCTV nwere nyocha vidiyo dị elu dị ka njirimara ihu na-enyere aka ịnagide nsogbu nke nyocha aghụghọ n'ụlọ akụ site na ịdekọ data azụmahịa na ịdọrọ foto ndị omempụ. Ihe omuma a bara uru iji mata ndi omekome ma nyere aka n’ichebe akaụntụ ndi ahia.
Igwefoto ahụ na-eyi nwere ike ime ka ndị ahịa nwee ntụkwasị obi na akụ. Ka nchekwa a na-echekwukwu karị, otú ahụ ka ndị ahịa nwere obi ike karị. Igwe onyunyo na-enyocha ihe gbasara ụlọ akụ site na igwefoto eyi na kamera CCTV na-aba oke uru.
Igwefoto eji ahụ ya Bụrụla akụkụ nke ngalaba ọ bụla. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ, ụlọ ọrụ ọ bụla na-anwa imegharị ya na nyocha nke ndị ọrụ ya.
N’otu aka ahụ, ụlọ ọrụ ịnshọransị na-anwa iji oge ndekọ vidiyo ejidere n’oge ihe ahụ gosipụtara ma ọ bụ na-anabataghị ibu ọrụ, ha ga-agakwa ruo n’ịnwa iji vidio mmadụ na-eme n’ụlọ ya ma ọ bụ nke ya. n’ebe ọhaneze na-egosi iji gosi na onye ahụ karịrị mmerụ ya. Yabụ, iji igwefoto ahụ na-echekwa ego buru ibu site n'aka ndị otu n'ihi na igwefoto ahụ na-enye ihe akaebe nke ma onye ọrụ a ruuru inye ego mkpuchi ma ọ bụ na ọ bụghị. Nke a bụ ihe ụlọ ọrụ ịnshọransị na-emesi ike na iji kamera ahụ.
N'ime ihe ndị ọzọ eji eme igwefoto, ọ bụrụ na ịhapụ inye akaụntụ, ụlọ ọrụ inshọransị nwere ike mepụta nke ya ma eleghị anya jiri ya megide gị ụbọchị ọzọ. N'otu aka ahụ, a na-eme maka nzukọ onwe onye mgbe onye na-ahụ maka inshọransị nwere ike ịhazi oge nzukọ nke onwe gị na atụmanya nke ịdaba gị na ikwu ihe megide nkwupụta gị. Yabụ, ịkwesighi ime nkwupụta ma ọ bụ kwenye na nzukọ na-ebughị ụzọ soro onye ọka iwu gị kpaa ya.
Ihe eji eyi ahu igwefoto nwekwara uru dịka ọ bara n’ọrụ ndị ọzọ. Iji maa atụ, Annie Yee onye ọrụ nke ụlọ ala na ụlọ, otu mgbe hụrụ ihe a na-agaghị echefu echefu n'ọfịs ya na onye zụrụ ahịa ahụ nwara idina ya n'ike. Ọnọdụ ahụ, ọ gbara ama n'agbanyeghị agbanyeghị usoro nchebe niile, chọrọ ka eji igwefoto ahụ mebiri emebi na ọfịs nke ụlọ ọrụ Real Estate. Ọ bụghị naanị na ọ bara uru igbochi ihe ndị mere ka Annie Yee kamakwa nzukọ a nwere ike ilegide anya n'ọtụtụ ọrụ nke ndị ọrụ na ndị na-azụ ahịa.
Anyị na-akọ akụkọ atụ nke Annie Yee ebe a iji gosipụta mkpa nke igwefoto ndị ahụ na-eyi. Ọ bụ n’ọnwa Ọktọba mgbe agbanyeghị nchekwa ndị ahụ niile, o nwere mmetụta na-akụda mmụọ mgbe ọ nọ n’ihe egwu mgbe ọ na-ezute mmadụ maka igosi ụlọ. Onye ahịa ahụ lere ya anya ruo ogologo oge. Ahụ erughị Annie ala ma nwee mmetụta ọjọọ ya maka ya. Mgbe ha gachara, ha gara n'ọfịs ha ka ha hụ ụlọ ahụ. Ha banyere n'ụlọ owu na-ama. Ọ na-akpachara anya ka ọ na-aga n'azụ ya mgbe niile ma zere mpaghara ebe ọ nwere ike ịdaba ya. Ka ọ dị ugbu a, ọ banyere n’ime ụlọ. Ka ọ banyere n’ime ụlọ ahụ onye ahụ chụrụ ya wee banye n’ime ụlọ ahụ mana nwanyị ahụ jụrụ nkwupụta ya. Onye ahụ gwuru uwe ogologo ọkpa ya wee dina n'ihe ndina. Annie Yee kwuru na igosipụta ihe ezuru ma hapụ ụlọ ahụ ozugbo. Ọ gwara ndị uwe ojii ozugbo wee nyocha. Dabere na akụkọ akụkọ, aha Michael Beat mara ya. E boro ya ebubo na ịkpa agwa ọ bụla, ịnwa mwakpo mmekọahụ nke atọ, nsogbu na udo.
Ihe a merenụ na-enye nnukwu mmụta na iji igwefoto ahụ na-eyi ihe dị mkpa na Industrylọ Ahịa ụlọ maka ndị ahịa ya niile.
Na mkparịta ụka a, anyị nwara ịchọpụta uru igwefoto ahụ siri dị na nsonaazụ nke ọmụmụ na nyocha dị iche iche. Okwu mmechi anyị bụ igwefoto nwere anụ ahụ nke bụ ụdị ngwaọrụ ọhụụ kachasị ọhụrụ na-eme ka arụmọrụ nzukọ ya dịkwuo elu site na ịkwalite arụmọrụ nchekwa yana ntụkwasị obi nke ndị ahịa.
Nzuzo 5435 1 Echiche Taa